के हो सांसद किन्न ९३ करोड पठाएको पाँच वर्ष पुरानो समाचारको वास्तविकता - Nepal Factcheck
के हो सांसद किन्न ९३ करोड पठाएको पाँच वर्ष पुरानो समाचारको वास्तविकता
सामाजिक सञ्जालमा पाँच वर्ष पुरानो एउटा समाचार अहिले फेरि भाइरल हुन थालेको छ। फेसबुकका विभिन्न ग्रुप र विभिन्न व्यक्तिहरुले सांसद किन्न दिल्लीले एसबीआई बैँकमार्फत् ९३ करोड भारु पठाएको खुलासा शीर्षकको समाचार सेयर गरिरहेका छन्। संविधान जारी भइसकेपछि सरकार परिवर्तन हुन लागेको बेलामा आएको यो समाचार अहिले एक्कासी फेरि फैलिएको हो। जबकि यो समाचार त्यतिबेला नै गलत भएको पुष्टि भइसकेको थियो। त्यतिबेला यो समाचार थुप्रै अनलाइनहरुमा आएका थिए।
अहिले फेरि केही फेसबुक ग्रुपहरुमा यो समाचारको लिङ्क भाइरल भएका छन्।
यो ग्रुपमा यो समाचार विगत केही दिनमा १८८ पटक सेयर भएको छ।
त्यसैगरी यो पेजमा पनि ३४४ पटक सेयर भएको छ। अरु विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरुमा पनि यो समाचार सयौँको संख्यामा सेयर भएका छन्।
माइसंसारले अक्टोबर १२, २०१५ मा नै यो समाचारको फ्याक्टचेक गरेको थियो।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एक्कासी हल्ला चलेको थियो- ‘चेन्नाइबाट नेपालस्थित भारतीय दूतावासको कर्मचारी Turai murugan को नाममा SBI बैङ्कको A/C number 77008903617 मार्फत ९३ करोड भारु ट्रान्स्फर भएको जानकारी भर्खरै प्राप्त भएको छ।’ यो हल्ला सुरु भयो र फैलियो सोसल मिडियामा। सत्य तथ्य के हो बुझ्दै नबुझी ट्विटर र फेसबुकमा रिट्विट र सेयर हुँदै धेरै जनासम्म पुग्यो यो कुरा। सोसल मिडियामा सुरु भएको यो हल्लालाई अनलाइनहरुले स्रोतको हवाला दिँदै समाचार दिएपछि त झन् के चाहियो र। हुँदाहुँदा एबिसी टेलिभिजनले ब्रेकिङ न्युजसमेत यही समाचारमा ठोक्यो र भोलिपल्टसम्म मुख्य हेडलाइन यही बजाइरहेको थियो। बैँकिङ बारे अलिकति पनि जानकारी भएको मान्छेलाई यो फगत हल्ला हो भन्ने थाहा पाउन कुनै गाह्रो थिएन।
१ : भारतीय दूतावासको कर्मचारीको नामै गलत
२ : बैँक खाता नम्बर नै गलत
हल्लामा SBI बैङ्कको A/C number 77008903617 मा ९३ करोड भारु ट्रान्सफर भएको भनिएको छ। यो एकाउन्ट नम्बर नै गलत छ। एसबिआई बैँकको खाता नम्बर १४ अङ्कको हुने गर्छ। यो चाहिँ ११ अङ्कको छ।
३ : कहाँबाट ट्रान्सफर भयो?
४ : FIU बिनाको रकम?
५ : नेपालमा भारु निकाल्न र साट्न मिल्दैन, कसरी आयो पैसा?
६ : रकमान्तर कसरी भयो?
हल्ला मच्चाउनेहरुले बरु ब्रिफकेसमा यति रकम भित्रियो भनेको भए पत्याउने आधार हुन्थ्यो। बैँकिङ च्यानल प्रयोग गरेर यति धेरै रकम ट्रान्सफर हुनु र शंकास्पद काममा उपयोग हुन त असंभव नै छ।
निश्कर्ष : कर्मचारीको नाम, बैँकको खाता नम्बर र अन्य कारणले पनि यो कुरा हल्लामात्र भएको पुष्टि हुन्छ। यस्ता फेक न्युजहरु नहटाइएका कारण पुनः फैलिने गरेको यो उदाहरणले देखाएको छ।